Uma uthi nhlá, kungase kubonakale sengathi emzini ngokhahlo Novokuznetsk siphile abavukuzi esiqinile kuphela steelworkers nabantu engabazi nhlobo ukuba ukuzijabulisa kanye nesithakazelo nakakhulu e Haute Cuisine. Kodwa akunjalo ezinzima Novokuznetsk. Le restaurant ohlwini ongakhetha nezidumile nokokuzilibazisa izakhamuzi nezivakashi. Kulesi sihloko sibheka izindawo ezithakazelisayo eziningi.
Brewery Indawo yokudlela Zoltan
Amazinga, ihlanganiswe ngochwepheshe noma yokudlela umhlaziyi, akusho ngaso sonke isikhathi ezinokwethenjelwa. Enye into - izilinganiso okusekelwe lobuya abasebenzisi, okuyinto ngenkuthalo nixoxe futhi ukuhlola zokudla Novokuznetsk nakwamanye amadolobha.
Zoltan ubekiwe lokuqala izivakashi izilinganiso. Itholakala eceleni kwehhotela lethu "Novokuznetskaya". Izivakashi badumise ubhiya, okuyinto ukwenziwa lapha, basibiza ngokuthi okumnandi kakhulu emzini. Ikhwalithi ukudla kanye Ungadla ezingeni ukuphakama, sicela izingxenye makhulu. Izikhungo friendly futhi fast.
I batusa ukuzama isoseji kusuka salmon nge dish side of ithoswe yathamba ubhiya sauerkraut, trout ne zikaphayini nuts. Kukhethwa kophudingi incane, kuyaqondakala format lesikhungo.
Lena yindawo enhle imibuthano zabesilisa, imihlangano nabangani kwezebhizinisi ukuze kwasemini ibhizinisi, ungaya lapha nomndeni wakho noma ukuhlela usuku romantic.
Indawo yokudlela Da Vinci
Esinye isikhungo nge high okuhlaziya ezinhle kanye nokubuyekeza. I engavamile kule ndawo - Cuisine Italian. Esikhathini imenyu, pizza omuhle uqweqwe elincanyana kunothile toppings, pasta kanye lasagna. Kukhona namanzi inyama steaks okuphekiwe amalahle, kanye amakhono kusukela Smokehouse ayo: salmon, trout, tuna, butterfish, Dorado, ulwandle bass, inyama yengulube, ulimi, inyama kanye nezinkukhu. Zonke simnandi kakhulu, kuphekwe ezingeni eliphezulu kakhulu.
A isidlo kulula thatha notshwala noma non-utshwala, uhla libanzi kakhulu. Ukuze izivakashi abancane kukhona imenyu enezingane ezinezidingo ezikhethekile sika. Ngenxa ikilasi master kusukela yokudlela, ungafunda kanjani ukupheka izitsha abawuthandayo futhi pamper isilwane lasagna kakhulu, ravioli noma tiramisu olubucayi. Akubona bonke zokudlela Novokuznetsk ngesandla esivuleke kangaka ukwabelana izimfihlo zabo.
The ingaphakathi yokudlela engavamile futhi zikhululekile kakhulu. Huge amafasitela-panoramic futhi kwahlonywa itende maphakathi ehholo umxhwele izivakashi.
Uma ungeke ukwazi uvakashele yokudlela, zonke izitsha etholakalayo oda nge-Internet.
Exotic Novokuznetsk kakhulu. Ubufakazi lokhu - eyesithathu oyisilomo yokudlela. Le nhlanganisela elingavamile umoya Oriental nephunga elimnandi namakha ukunambitha izitsha bendabuko. Ngaphezu kwalokhu, nezela izihambi abadumile - lokho iresiphi ukuphumula okuhle.
Ungadliwa abantu abangu lapha lolu bumba kuhhavini - tandoor, okuyinto ngokukhethekile akhululwe Uzbekistan. Ukudla ethole kulo ukunambitheka esiyingqayizivele kanti iphunga: amakhekhe okuzenzela, inyama. Laghman inhlama, amadombolo, chebureks, SAMSA isitimela ngokwabo kuphela. Ibhizinisi ikhadi yokudlela - kungcono ngempela Fergana pilaf. Phelelisa idina hookah. Futhi elimnandi, halva okuzenzela, chak-chak nezinye amaswidi bendabuko.
yokudlela ingaphakathi idale umoya asempumalanga. Lokhu ezithambile bafaniswe pillows, SOFAS, zokudla kuhlanzekile yini egqamile amatafula, izitsha kazwelonke, okhaphethi, izindwangu eziningi ekuklanyweni zalapho ethize.
Yokudlela "Paulaner" (Novokuznetsk)
Lesi sikhungo uye kahle ngokwaso njengoba yokudlela German nge ezingeni European cuisine inkonzo.
Interior wekugcina, ehloniphekayo, shades efudumele ensundu. Eziningi izinkuni, namafasitela amakhulu indawo engezansi. Ikamelo ubanzi futhi zikhululekile.
Ijwayele futhi ukumema amaqembu ezinezihloko, amaqembu omculo enze, a dance floor, Ngezikhathi zasehlobo, ithala ehlobo.
Ikhishi International. Ungazama inkukhu Thai futhi Burger American, futhi pizza Italian.
Lena yindawo enhle ukuzijabulisa nabangane noma ezinye abalulekile, lapha ungakwazi ukubheka futhi kwasemini ibhizinisi, bakubheka ngayo emhlanganweni ibhizinisi.
Indawo yokudlela "paprika" (Novokuznetsk)
"Paprika" yokudlela kuzibiza lasekhishini elalivuliwe. Lokhu ehilelekile sasimthanda labo izivakashi abathanda ukubukela labapheki emsebenzini. Kodwa ngisho ngaphandle ukuthi yokudlela asemkhathini kakhulu: ihholo ivulekile, namafasitela amakhulu, imibala efudumele, eziningi izinkuni, Ababazi bakha obhasikidi njengendlela umhlobiso, ukukhanya esithambile.
Iqoqo izitsha ezahlukene ku imenyu: cuisine Balkan, isiNtaliyane, isi-Chinese, isi-Japanese, zaseCaucasia, Russian. Okunjalo anhlobonhlobo zokudla, akuwona wonke Novokuznetsk banganikeza.
Izivakashi kakhulu badumisa batusa kakhulu pizza ukunambitheka Wok inkukhu nge isicinganani nati, ukudla kwasolwandle kanye sauce garlic, soba nge yenkomo. Ngaphezu kwalokho, kukhona amadombolo okuzenzela kanye amadombolo, kebabs kakhulu, ophaya. Ukunikezwa kophudingi okoqobo kusuka chef.
Ezinganeni kukhona imenyu ahlukene kanye ekhoneni play ukuthi limnandi kakhulu imibhangqwana, ukuqhuba master emakilasini. Zonke izitsha yokudlela ayatholakala nge-oda nge-Internet.
Izivakashi uqaphela ukahle, umkhathi soulful, abasebenzi esinenhlonipho futhi benobungane.
Indawo yokudlela "Zodiac"
Lokhu ukusungulwa libhekene ingaphakathi ngokuyinhloko elicwengiweyo ngemibala egqamile. Lokhu kwenza kube yindawo enhle ngoba celebration wedding, kuhlanganise on-site yokubhalisa.
Njengoba ukuzijabulisa yokudlela "Zodiac" (Novokuznetsk) inikeza umculo bukhoma.
Esikhathini imenyu - cuisine European: trout in Batter ngewayini noshizi, okumnandi inkukhu eyayigcwele kusuka chef, Steak noma salmon chum salmon duck eyosiwe ne apula.
Lokhu kubuyekeza kuhlanganisiwe kude zokudla ezithakazelisayo kakhulu Novokuznetsk, kunabaningi. Nokho, la mazwi angenhla yanele ukuba ukuhlela ngakusasa kusihlwa nabangani noma abathandekayo.
Indawo yokudlela "Molon Lave": incazelo, ukubuyekezwa, imenyu
Jagger, club (eMoscow): isithombe, ukubuyekezwa
Calorie e "CFS" futhi umlando sha
Japanese massage ebusweni (Shiatsu)
Ngingenza kanjani ekhaya suit "Scream"
A amazwi ambalwa mayelana nendlela ukudweba isitimela
Cheesecakes Delicious: iresiphi eyaziwa kusukela ebuntwaneni
Bali ePharadesi Beach 4 * (eGrisi, eKrethe nase): incazelo ehhotela, imisebenzi, ukubuyekeza